မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး ဒလတံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ၁၆. ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီး - Myanmar Builders Guide
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဒလမြို့တို့ကို ဆက်သွယ် မည့် မြန်မာ-ကိုရီးယားချစ်ကြည်ရေး ဒလတံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ရန်ကုန်မြို့ဘက်ခြမ်း လုပ်ငန်းခွင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ သည်။
လုပ်ငန်းခွင် စီမံကိန်းရုံးတွင် ရန်ကုန်မြို့ဘက်ခြမ်းရှိ စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ တံတားဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကောင်းချို၊ Contractor ကုမ္ပဏီဖြစ်သော GS Engineering & Construction Corporation မှ Project Director Mr. Yun Ho CHO တို့က တံတားဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ထို့နောက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်လင်းက ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်က တင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပြီး Contractor ကုမ္ပဏီ နှင့် Sub-Contractor ကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရည်အသွေး ပြည့်မီကောင်းမွန်စေရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေး စသည့်အချက်များကို အဓိကထားဆောင် ရွက်သွားကြရန် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ဝန်ကြီးချုပ်သည် ပင်မတံတား တည်ဆောက်ရေး ရန်ကုန်မြို့ဘက်ခြမ်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အ​ခြေအနေများကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဒလတံတား တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဘက်မှ ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅၇ ဒသမ ၈၃ သန်း၊ မြန်မာဘက်မှ ထည့်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဒသမ ၃၄ သန်း စုစုပေါင်း ၁၈၈ ဒသမ ၁၇ သန်းဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမည် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ စီမံကိန်း တစ်ခုလုံး၏ ၁၆. ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်လင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာလီဆောင်ဟွာ၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများနှင့် တံတားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Ministry Of Information ​